Ihowuliseyili Glass Bottle abenzi, abaxhobisi - China iglasi isiqhumiso Bottle mveliso
10ml 15ml isilinda imilo iglasi isiqhumiso elula ibhotile kunye nempompo yegolide zokutshiza
Le 10ml 15ml ecacileyo ibhotile yeglasi ibhotile yeglasi ubungakanani entle entle. Yongeza ulonwabo olukhulu kwindawo yokuhlala entle kunye netafile yokunxiba kuyo yonke indawo! Ukuba unemibuzo ethile malunga neemveliso zethu, nceda unxibelelane neqela lethu lenkonzo yabathengi.
30ML 50ML 100ML IZIQINISEKISO NGOKUPHELELEYO NGOKUQINISEKISA IBHODLELA IGLASI KUNYE OKULUNGILEYO INKUNZI Isitshizi
Igolide / yesilivere Sprayer Cap
Isitshizi esifanelekileyo seNkungu
Yangamafu Glass Bottle
Ibhotile yesiQhumiso enokugcwaliseka
Iibhotile ezikumgangatho ophezulu ulwelo photosensitive. Kukulungela ngokobungakanani, inokuqhutywa naphi na, ilungele iziqholo, iioyile ezifanelekileyo kunye neeoyile ezifanelekileyo. Nika izaphulelo zobungakanani.
1oz 30ml Mnyama Refillable Iibhotile iibhotile, Portable Square engenanto Glass Perfume Atomizer Bottle kunye Spray Umfaki sicelo
Imilinganiselo: 4.5 x 2.3 x 9.3 cm / 1.8 x 0.9 x 3.7 intshi (ubude x ububanzi x ukuphakama); umthamo: 30 ml / 1 ukanti
Iyaphatheka kwaye iyagcwaliseka. Ngesinyithi esikhanyayo sesilivere esine-mist sisitshizi kunye nesitayile esilinganayo
Isisitshizi esihle senkunkuma esineziqholo, nesinyithi esitshizi esitshizi, isitshizi senkungu esikhoyo
Kukhulu ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukutshiza ngqo emlonyeni webhotile ukuze ugcwaliswe. Ingca yeplastiki inabela ezantsi kwebhotile ukuqinisekisa ukuba izinto zakho zinokufikeleleka kude kube lixesha lokugqibela
I-100ml 3.4oz yesitayile seVintage ecacileyo engenanto yeGlasi yeBhotile eneTassel Airbag Atomizer
Ibhotile yeglasi kunye nesigqubuthelo sesinyithi esinombala omde we-airbag atomizer, i-retro kunye noyilo lwesitayile
Ububanzi besicelo: Amafutha, into yokuthambisa, ioyile inokuphinda iphindwe, kwaye ibhotile yeziqholo inokuphinda isetyenziswe.
Nceda ugcine ibhalansi xa ugcwalisa okanye usebenzisa isiqholo sakho osithandayo kwibhotile enokuphinda ibuye
Ibhotile yesiqholo egqibeleleyo enokuphinda yenze isiqhumiso sakho sihlale ixesha elide. Esi sesona sipho sibalaseleyo sabathandi, abazali kunye nabahlobo
Unokuhombisa igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ukongeza isitayile esihle kunye nokuhonjiswa kwigumbi lokuhlambela kunye netafile yokunxiba
Sinika ulwenziwo olukumgangatho ophezulu weebhotile zeziqholo, kubandakanya iminqwazi kunye nezitshizi. Sibonelela ngeenkonzo ezinje ngokutshiza ngombala, ukuprinta, kunye nokwenza ibhronzi njalo njalo.
Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo,